DAAWO: ”Haddaad Kenyan ku faanayso micneheedu ma aha inaad Somalia nebcaato!” – Faarax Macallin | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka DAAWO: ”Haddaad Kenyan ku faanayso micneheedu ma aha inaad Somalia nebcaato!” –...
DAAWO: ”Haddaad Kenyan ku faanayso micneheedu ma aha inaad Somalia nebcaato!” – Faarax Macallin
(Nairobi) 09 Okt 2019 – Siyaasiga Faarax Macallin oo horay usoo noqday Guddoomiye Xigeenka Baarlamanka dhexe ee Kenya ayaa ka hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin sida ay Kenya sharci darrada ugu gashay Somalia, iyo danaha is diidaya ee dalalka deriska la ah Somalia, isagoo sheegay in dalalka derisku ay marka dambe aalaaba eedaan dhibka ay u gaystaan deriskooda marka ay dhibaato lasoo gudboonaato, isagoo tusaale usoo qaatay Ivory Coast.
Wuxuu kaloo ka hadlay in Kenya ay weli dabada hayso siyaasad ah in Somalia la lug gooyo, taasoo ay beri Itoobiya isla meel dhigeen, balse ay hadda iyadu aragtidaa bedeshey, waa sida uu u dhigay e.
Ha yeeshee, wuxuu Faarax soo hadal qaaday arrin ay dadka qaarkii u bixiyeen ”Cabdi Ileey Phenomena”, taasoo uu haatanna xambaarsan yahay Aadan Barre Ducaale, waana aragti aan bislayn oo ku dhisan in si loo muujiyo in Kenya ama Itoobiya la jecel yahay ay adigoo Soomaali ah khasab kugu tahay inaad muujiso nacayb badan oo aad u hayso Soomaalida kale.
Arrintaas oo ay horay aqoonyahanno badani ku tilmaameen ifafaale cusub oo laakiin istaraatijiyad ahaan khaldan, iyagoo daliishanaya in Somalia ay mar kale gacan dheeraad ah u tahay qofka Soomaaliga ah ee Kenya iyo Itoobiya haatan u taliso ayaa waxaa fikirkiisa ka dhiibtey Faarax Macallin oo inta badan ah siyaasi xambaarsan aragti qoowminnimo.
”Waxaan ahay nin Kenyan ah, waxaan kaloo ogsoon ahay in kuwa xagga jira aan isku dhiig nahay. Nin baa moodaya in marka aad Kenyan baan ahay aad ku faanayso ay tahay inay kuugu xigto Soomaaliyaan nebcahay. Maya! Maya” ayuu yiri Faarax Macallin oo sheegay inuu markasta jecel yahay wanaaggsa Somalia.
Previous articleSomalia oo muddo dheer kaddib tillaabo ka qaadday arrin dhib ku haysey shacabka
Next articleDHEGEYSO: Xisbiga soo galooti diidka ah ee SD oo taageeray hindise ay wadato dowladda Sweden